के अब पृथ्वीमा सुन सकिँदै छ ? यसो भन्छन् वैज्ञानिक..
September 26, 2020 1679
सुनका गहना’हरू खरीद गर्दा, सुन कहाँ’बाट आउँछ, र यसको आपूर्ति सँधै जारी रहन्छ की रहदैन ? भन्ने बारे कतिपयले नसोच’को पनि हुन सक्छ । गत महिना सुनको मूल्य’मा रेकर्ड वृद्धि भयो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजा:रमा यसको भाउ प्रतिआउन्स (करिब २८.३५ ग्राम) २,००० डलर (नेपाली २ लाख ३५ हजार ९ सय ६३रुपैयाँ ) पुग्यो। गोल्ड स्थिति प्रतीकको रूपमा लगानी:को लागि प्र:योग गरिन्छ र धेरै इलेक्ट्रोनिक उत्पादन:हरूमा प्रयोगको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ ।
विज्ञहरूले उच्च उत्खनन बिन्दुको कुरा गर्छन् जब कुनै एक वर्षमा उत्खनन गर्न सकिने उच्चतम परिमा’णमा सुन झिकिन्छ। कतिपय विश्वास गरेका छन्, संसार त्यो बिन्दुमा पुगिसकेको छ।
वर्ल्ड गोल्ड काउन्सि:लका अनु’सार २०१९ मा सुनको कुल: उत्पादन ३ हजार ५ सय ३१ टन थियो जुन २०१८ भन्दा एक प्रति’शत कम रहेको जनाइएको छ। उत्पादन २००८ पछि सुन पहि’लो पटक घटे:को थियो।
विश्व गोल्ड काउन्सि:लका प्रवक्ता हन्ना ब्रान्डसे’टर भन्छन्, ‘सुन खानीबाटट आपूर्ति कम भइरहेको छ वा आउने वर्ष’हरूमा कम हुन सक्छ किनकि सुनको खानी:हरू जुन अहिले पूर्ण रूपमा प्रयोग भइरहेको छ र नयाँ खानीहरू कम भइरहेको छ। तर त्यसो’भए सुनको उत्पा’दन चरम शिखरमा पुगेको छ ।’
विज्ञह:रू भन्छन, ‘यदि (पीक गोल्ड)पनि आयो भने यस्तो हुँदैन कि सुनको उत्पादन धेरै चाँडै कम हुनेछ। यो गिरा’वट केहि दशकहरुमा बिस्तारै आउनेछ। कम्पनी’हरूले दुई तरिका:मा जमिन मुनि रहेको सुनको मात्रा अनुमान गर्छन्।’
रिजर्भ्स – अहिलेको सुनको भाउ अनुसार फाइदाज:नक रूपमा निकाल्न सकिने सुनको परिमा:ण।
रिजोर्सेस – थप अनुसन्धान’पछि उत्खनन गर्दा सम्भावित रूपमा फाइदाजनक हुनसक्ने सुनको परि’माण।
रिजोर्सेस:भन्दा सुनको रिजर्भ्सको हिसाब निकाल्न सजि’लो छ। अमेरिकाको भूगर्भीय सर्वे’क्षण अनुसार, सुनको सञ्चय हाल ५० हजार टन छ। हालसम्म १ लाख ९० हजार टन सुन उत्खनन भइ:सकेको छ। अर्थात् लगभग २० प्रतिशत सुन बाँकी छ।
पछिल्लो सम:य नयाँ प्रविधि’हरूले थप परिमा’णको सुनलाई आर्थिक रूपमा फाइदा हुनेग:री उत्खनन गर्न सकिने भएको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट खानी र ठूलो डाटा जस्ता नयाँ प्रवि’धिको सहयो’गले सुन उत्खनन गर्न स:किन्छ । रोबोट:हरू सुन उत्खनन गर्न धेरै ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाको विटवा’टरस्रान्ड बेसिन सुन खानीको सबै भन्दा ठूलो खानी रहेको छ। विश्वको एक’तिहाइ परिमा’णको सुन त्यहाँबाट मात्र उत्खनन गरेर निकालिएको छ।
अन्य ठूला खानीमा दक्षिण अफ्रि’काकै मपोनेङ खानी, अस्ट्रेलियाका सुपर पीट तथा बोडिङ्टन खानी, इन्डोनेशियाको ग्रास्बर्ग खानी तथा नेभाडा, अमेरिकाका खानी हुन्। अहिले विश्वमा सबभन्दा धेरै सुन उत्खनन गर्ने मुलुक चीन हो भने क्यानडा, रुस तथा पेरू पनि ठूला उत्पादक हुन्।
कम्पनीहरूमध्ये सब’भन्दा ठूलो सुन’खानी कम्प्लेक्स नेभाडा गोल्ड माइन्सको छ जसको बहु’मत स्वामित्व ब्यारिक गोल्डसँग छ। नयाँ खानीहरू अब कमै फेला पर्न थाले’का छन्। त्यसैले धेरै उत्पा’दन पुरानै खानीहरूबाट भइरहेका छन्।
चन्द्रमा’मा पनि सुन रहेको जनाइएको छ। तर त्यस’लाई त्यहाँ उत्खनन गरेर पृथ्वीसम्म ल्याइपुर्‍याउँदा उच्च लागत लाग्ने बताइएको छ। साथै एन्टार्टीका म’हादेशमा पनि केही सुनखा’नी रहेको बता’इन्छ। त्यहाँबाट पनि उत्खनन गर्न अत्यन्त महँगो पर्छ।
Nextआज नेपालमा कोरोनाबाट ८ जनाको मृ’त्यु , यी जिल्लाका हुन् मृतक..
मलाई भेट्ने बित्तिकै पल दाई अंगालो हालेर रुनु भो, मैले सम्हान सकिन, चौकीबाट रुँदै निस्किए बिजय (भिडियोसहित)
यी हुन: कोरोना संक्रमण’मुक्त भएका नेपालका ८ जिल्ला…
आमा कहाँ छिन् ? भनेर
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (136401)